Semalt:4डाटा स्क्र्यापिंग उपकरणहरू जुन तपाईंको समय बचत गर्दछ
प्रोग्रामिंग डाटा विज्ञानको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। एक व्यक्ति म्यानुअल रूपमा स्क्र्याप गर्न उत्कृष्ट प्रोग्रामिंग कौशल विकास गर्नुपर्दछ। जहाँसम्म, केहि व्यक्तिले फरक कोडिंग भाषाहरू सिक्न सक्दैनन् र उपयुक्त विकल्पहरूको खोजी गर्न सक्दैनन्। निम्न डाटा स्क्र्यापिंग उपकरणहरू गैर प्रोग्रामरहरूको लागि उत्कृष्ट हो।
१. किमोनो ल्याबहरू
किमोनो ल्याब्स धेरै समय को लागी आसपास छ। यो एक उत्तम र सबै भन्दा अचम्मको डाटा स्क्र्यापिंग अनुप्रयोग हो। यो खुला स्रोत कार्यक्रम १ 15-दिन परीक्षण संस्करणको साथ आउँदछ, तर यसको नि: शुल्क संस्करण पनि उपलब्ध छ। किमोनो ल्याब्सले सम्पूर्ण वेबसाइटलाई स्क्र्याप गर्दछ, डाटा स collection्कलनबाट यसको स्क्र्यापिंग र मान्यकरण र प्रयोगको लागि सुरू। किमोनो ल्याब्स पनि एक शक्तिशाली वेब क्रलरको रूपमा काम गर्दछ र कुनै कोड बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको शीर्षमा, यसले तपाईंलाई एकै समयमा ठूलो संख्यामा साइटहरू स्क्र्याप गर्न अनुमति दिँदछ र गुणमा कुनै सम्झौता गर्दैन। किमोनो ल्याब्स सधैं उद्यमहरूको पहिलो विकल्प हुन्छ, डाटा संग्रह, दृश्यता, र संगठनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको लागि ठूला डाटा एनालिटिक्सहरू पनि लागू गर्दछ, तिनीहरूको काम सजिलो बनाउँदै।
गैर प्रोग्रामरहरूको लागि डाटा स्क्र्यापिंग पहिले कहिल्यै सजिलो थिएन। यो विशेषज्ञहरु द्वारा निर्मित एक स्वचालित वेब निकासी प्लेटफर्म हो र दाबी गर्दछ कि अहिले सम्म धेरै संख्यामा वेब पृष्ठहरु लाई स्क्र्याप गरिएको छ। Import.io न केवल प्रोग्रामरहरूको लागि मात्र हो र डाटा वैज्ञानिकहरूको लागि पनि उत्कृष्ट हो। यस उपकरणले स्वत: प्रोसेसिंग सुरु गर्नु अघि तपाईको लागि सबै भन्दा राम्रो जानकारी पत्ता लगाउँदछ र पाठ खानी विशेषज्ञहरु द्वारा पनि प्रयोग गरीन्छ। यसका हाइपर-प्यारामिटरहरूले तपाईंलाई त्रुटि-रहित डाटा छनौट गर्न र यसलाई अपेक्षित ढाँचामा स्क्र्याप गर्न सजिलो बनाउँदछ।
Facebook. फेसबुक र ट्विटर एपीआईहरू
सामाजिक मिडिया विज्ञहरु को लागी, स्टार्टअपहरु र गैर प्रोग्रामरहरु को लागी, फेसबुक र ट्विटर एपीआई काफी प्रभावी छ। तिनीहरू विशिष्ट एपीआई मार्फत डाटा स्क्र्यापिंग सेवाहरू प्रदान गर्दछ र तपाईंको डेटालाई इच्छित ढाँचामा स्क्र्याप गर्न केहि मिनेटहरू लिन्छन्। यसले डाटासेटहरू सिर्जना गर्न परिभाषित स्रोतहरू प्रयोग गर्दछ र तपाईंको वेब पृष्ठहरूलाई कुनै समय बिना कुनै प्रोग्रामिंग सीप र प्राविधिक ज्ञान बिना नै क्रल गर्दछ। एपीआईहरूले फरक डाटा सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न, तपाईंको पाठमा त्रुटिहरू पत्ता लगाउन र सम्पादन गर्न मद्दत गर्दछ, र प्रयोगकर्ताहरूका लागि छवि र भिडियो दुबैबाट उच्च-गुणवत्ता जानकारी प्राप्त गर्दछ।
Sc. Scraper (एक Chrome विस्तार)
यदि तपाईं नियमित रूपमा गुगल क्रोम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र यो तपाईंको प्राथमिक वेब ब्राउजर हो भने, तपाईं भर्खर स्क्र्यापर प्रयोग गर्नुहोस्। यो एक उत्तम र सबै भन्दा प्रभावी डाटा स्क्र्यापिंग कार्यक्रम हो। यो मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजीको साथ निर्मित हो र विशेष गरी गैर प्रोग्रामरहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। स्क्र्यापरले तपाईंको लागि उपयोगी जानकारी निकाल्न सक्छ र यसमा प्रशस्त सुविधाहरू छन्। यसको स्प्याम पत्ता लगाउने विकल्पले तपाईंलाई स्प्याम डाटाबाट छुटकारा पाउन दिन्छ र कुनै पनि हिज्जे वा व्याकरण त्रुटि बिना नै तपाईंको आवश्यकताको आधारमा जानकारी व्यवस्थित गर्दछ। स्क्र्यापरले पोष्ट टिप्पणी र ईमेलहरूको विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई राम्रोसँग निकाल्ने डाटा प्राप्त गर्दै, र यो निर्धारण गर्दछ कि यो तपाईंको व्यवसायको लागि उपयोगी छ वा छैन।
अन्य सामान्य डाटा स्क्र्यापिंग उपकरणहरूको विपरीत, माथिको services सेवाहरूलाई तपाइँलाई टेक्निकल दिमागको आवश्यकता पर्दैन। साथै, तपाईले यी डाटा स्क्र्यापरबाट फाइदा लिन प्रोग्रामि learn्ग भाषाहरू सिक्नुपर्दैन। तपाईंले बस तिनीहरूलाई स्थापना र सक्रिय गर्नुपर्नेछ तिनीहरूको विकल्पहरू र डाटा स्क्र्यापि features सुविधाहरूबाट लाभ उठाउन।